အားပေးကြမ်းတဲ့ စိတ်ရောဂါသည် ပရိသတ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့မယ့် ဇေရဲထက် – XB Media Myanmar
အားပေးကြမ်းတဲ့ စိတ်ရောဂါသည် ပရိသတ်ကို ကိုယ်တိုင်သွားတွေ့မယ့် ဇေရဲထက်
လက်ရှိအချိန်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ မင်းသားတစ်လတ်ဖြစ်ပြီး ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင် အလွမ်းအဆွေးဟာသ အက်ရှင်စတဲ့ ကာရိုက်တာတွေကိုလည်း အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားဇေရဲထက်ကတော့ မော်လမြိုင်ဘက်က အရမ်းအားပေးကြမ်းတဲ့ စိတ်ရောဂါသည် ပရိသတ်ကို လူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့မယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ခဲနက်အားပေးတဲ့ စိတ်ရောဂါ ဝေဒနာရှင်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇေရဲထက်က “ခံစားချက်ကတော့ အရမ်းလည်း သနားသွားတယ်။ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် ငိုချင်သွားတယ်ပေါ့နော်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် ပိုပြီးအားရှိသွားတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တယ်။ သူပြောတဲ့ စကားလေးလည်း ကြိုက်ပါတယ် တစ်ယောက်ဆို ပိတောက်တိုပိတောက် အဲ့လိုပုံစံဘေးတွေပေါ့နော်။ အရမ်းကို ဖြူဖြူစင်စင် ရင်းရင်းနီးနှီးနဲ့ သူစိတ်ထဲက ပါပါနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး အားပေးတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်ရတာပေါ့။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာလည်း ဝမ်းနည်းမိပါတယ် သူကအရမ်းတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ ကိုယ်လည်း သွားတွေ့ဖို့တော့ အခုစီစဉ်နေတယ်ပေါ့။ သွားတွေ့ဖြစ်အောင်လည်း သွားတွေ့မှာပါဗျ။
ကျွန်တော်က အမှန်မှန်ဆို မသိဘူး Facebook မှာတက်လာတဲ့အခါကျတော့မှ ကြည့်လိုက်တဲ့ အခုမှာ အရမ်းသနား သွားတယ်။ အရမ်းသနားတာထက် သူကိုယ့်ကို အားပေးတာကြီးကလေ ကြောက်စရာကြီးပေါ့နော်။ ဘယ်လိုပြောရမလဲ မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့ ပုံစံကြီးက တကယ်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ ရင်ထဲက ပါတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးနဲ့ ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုက အခုပြောသလိုပေါ့ ဝေဒနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ့ အခါကျတော့ သူ့လိုလူတစ်ယောက်တောင်မှ ကိုယ့်နာမည်လည်းသိတယ် ကိုယ့်ကိုလည်း အားပေးတယ်ဆိုတော့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထပ်ပြီး ကြိုးစားလာရမယ်ဆိုတာကိုတော့ သိလာရပါတယ်။
သူက မော်လမြိုင်ဘက်ကနဲ့တူတယ် ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့ ဟိုနေ့က စာထဲမှာဖတ်လိုက်ရတာတော့။ သူ့ကို တွေ့ကိုတွေ့မှာပါ တွေ့ဖြစ်မှာပါ။ လောလောဆယ်တော့ ကျွန်တော်က ကိုယ့်ရဲ့ အိမ်တွင်းရေးအခက်အခဲတွေလည်း ရှိနေတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း ကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ နားနေရတယ့် အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်နေတာပေါ့။ အဲ့အတွက် ကျွန်တော် နည်းနည်းလေးတော့ ချင့်ချိန်နေရတာပေါ့နော်။ သွားတွေ့မယ့်အချိန်ကျရင် သူတို့ကို အသိပေးပြီးတော့ သွားတွေ့မှာပါဗျ။ အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ ရွာခံတွေဘာတွေနဲ့. နည်းနည်းလေးစုံစမ်းပြီးတော့ သွားတွေ့မှာပါ။
သူက ကိုယ့်ကို အရမ်းတွေ့ချင်တာကို အရမ်းတွေ့ချင်တဲ့ အခါကျတော့ ကိုယ်ကိုတိုင်လည်း သူ့နေရာမှာ ခံစားမိပြီး ကျွန်တော်သွားတွေ့ဖြစ်မယ်။ အားတက်မိတာပေါ့ ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့ အယောက်တစ်ရာနဲ့ ကိုယ့်ကိုအားပေးတဲ့တစ်ယောက် တကယ်စိတ်ရင်းမှန်မှန်နဲ့ အားပေးတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်ရင်တောင် အဲ့စိတ်ရင်းမှန်မှန်နဲ့ အားပေးတဲ့တစ်ယောက် အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ ကျွန်တော်သူ့ကို အရမ်းလည်း ချစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း သူတို့ကို လေးစားအားကျတယ် သူတို့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် ကျွန်တော့်ဘက်ကလည်း ပြုမူနေထိုင်သွားမယ်ဆိုတာကို ဒီကနေပြီးတော့ ပြောချင်ပါတယ်။ ညီမလေးကို အရမ်းချစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့ညီမလေးကို လာတွေ့ပါမယ်လို့။”လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။
လကျရှိအခြိနျမှာ အောငျမွငျနတေဲ့ မငျးသားတဈလတျဖွဈပွီး ထိပျတနျးမငျးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့အပွငျ အလှမျးအဆှေးဟာသ အကျရှငျစတဲ့ ကာရိုကျတာတှကေိုလညျး အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသားဇရေဲထကျကတော့ မျောလမွိုငျဘကျက အရမျးအားပေးကွမျးတဲ့ စိတျရောဂါသညျ ပရိသတျကို လူကိုယျတိုငျသှားတှမေ့ယျလို့ အငျတာဗြူးတဈခုမှာ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
တဈခဲနကျအားပေးတဲ့ စိတျရောဂါ ဝဒေနာရှငျလေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ဇရေဲထကျက “ခံစားခကျြကတော့ အရမျးလညျး သနားသှားတယျ။ ကွညျ့ရငျးနဲ့တောငျ ငိုခငျြသှားတယျပေါ့နျော။ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့ကိုကြှနျတျော ပိုပွီးအားရှိသှားတာပေါ့နျော။ ကြှနျတေျာ့ကို အရမျးခဈြတယျ။ သူပွောတဲ့ စကားလေးလညျး ကွိုကျပါတယျ တဈယောကျဆို ပိတောကျတိုပိတောကျ အဲ့လိုပုံစံဘေးတှပေေါ့နျော။ အရမျးကို ဖွူဖွူစငျစငျ ရငျးရငျးနီးနှီးနဲ့ သူစိတျထဲက ပါပါနဲ့ ကိုယျ့ကို ခဈြမွတျနိုးပွီး အားပေးတယျဆိုတာကို သိလိုကျရတာပေါ့။ ကိုယျ့စိတျထဲမှာလညျး ဝမျးနညျးမိပါတယျ သူကအရမျးတှခေ့ငျြတယျဆိုတော့ ကိုယျလညျး သှားတှဖေို့တော့ အခုစီစဉျနတေယျပေါ့။ သှားတှဖွေ့ဈအောငျလညျး သှားတှမှေ့ာပါဗြ။
ကြှနျတျောက အမှနျမှနျဆို မသိဘူး Facebook မှာတကျလာတဲ့အခါကတြော့မှ ကွညျ့လိုကျတဲ့ အခုမှာ အရမျးသနား သှားတယျ။ အရမျးသနားတာထကျ သူကိုယျ့ကို အားပေးတာကွီးကလေ ကွောကျစရာကွီးပေါ့နျော။ ဘယျလိုပွောရမလဲ မပွောတတျဘူးပေါ့နျော။ ကိုယျ့ကိုအားပေးတဲ့ ပုံစံကွီးက တကယျကို လှိုကျလှိုကျလှဲလှဲနဲ့ ရငျထဲက ပါတဲ့ပုံစံမြိုးကွီးနဲ့ ပွီးတော့ နောကျတဈခုက အခုပွောသလိုပေါ့ ဝဒေနာရှငျတဈယောကျဖွဈနတေဲ့ အခါကတြော့ သူ့လိုလူတဈယောကျတောငျမှ ကိုယျ့နာမညျလညျးသိတယျ ကိုယျ့ကိုလညျး အားပေးတယျဆိုတော့။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျထပျပွီး ကွိုးစားလာရမယျဆိုတာကိုတော့ သိလာရပါတယျ။
သူက မျောလမွိုငျဘကျကနဲ့တူတယျ ကြှနျတျောထငျတာပေါ့ ဟိုနကေ့ စာထဲမှာဖတျလိုကျရတာတော့။ သူ့ကို တှကေို့တှမှေ့ာပါ တှဖွေ့ဈမှာပါ။ လောလောဆယျတော့ ကြှနျတျောက ကိုယျ့ရဲ့ အိမျတှငျးရေးအခကျအခဲတှလေညျး ရှိနတေယျ။ ကိုယျကိုတိုငျလညျး ကနျြးမာရေးသိပျမကောငျးနတေဲ့အခါကတြော့ နားနရေတယျ့ အခွအေနတေဈခုဖွဈနတောပေါ့။ အဲ့အတှကျ ကြှနျတျော နညျးနညျးလေးတော့ ခငျြ့ခြိနျနရေတာပေါ့နျော။ သှားတှမေ့ယျ့အခြိနျကရြငျ သူတို့ကို အသိပေးပွီးတော့ သှားတှမှေ့ာပါဗြ။ အဲ့မှာသူတို့ရဲ့ ရှာခံတှဘောတှနေဲ့. နညျးနညျးလေးစုံစမျးပွီးတော့ သှားတှမှေ့ာပါ။
သူက ကိုယျ့ကို အရမျးတှခေ့ငျြတာကို အရမျးတှခေ့ငျြတဲ့ အခါကတြော့ ကိုယျကိုတိုငျလညျး သူ့နရောမှာ ခံစားမိပွီး ကြှနျတျောသှားတှဖွေ့ဈမယျ။ အားတကျမိတာပေါ့ ကိုယျ့ကိုတိုကျခိုကျတဲ့ အယောကျတဈရာနဲ့ ကိုယျ့ကိုအားပေးတဲ့တဈယောကျ တကယျစိတျရငျးမှနျမှနျနဲ့ အားပေးတဲ့ တဈယောကျနဲ့ ယှဉျရငျတောငျ အဲ့စိတျရငျးမှနျမှနျနဲ့ အားပေးတဲ့တဈယောကျ အတှကျ အစှမျးကုနျကွိုးစားသှားမှာပါ။ ကြှနျတျောသူ့ကို အရမျးလညျး ခဈြပါတယျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး သူတို့ကို လေးစားအားကတြယျ သူတို့ရဲ့ သရုပျဆောငျကောငျးတဈယောကျဖွဈအောငျ ကြှနျတေျာ့ဘကျကလညျး ပွုမူနထေိုငျသှားမယျဆိုတာကို ဒီကနပွေီးတော့ ပွောခငျြပါတယျ။ ညီမလေးကို အရမျးခဈြပါတယျ။ တဈနညေီ့မလေးကို လာတှပေ့ါမယျလို့။”လို့ ပွောသှားခဲ့ပါတယျ။
ကျားကျားကြိုက်ကြိုက် ရုပ်ရှင်ကားကို ပရိသတ်တွေ ကြိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့ မြင့်မြတ်
ကြိုက်တဲ့ သူနဲ့ Troll ကြပါ ရယ်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ ဖြူဖြူထွေး